Lucky Links | Lucky Links Izikhala | CoinFalls Online Casino
Lucky Links Izikhala is a created by Just For the Wins along with the cooperation of Microgaming. Ungahlala ujike ezikrinini zakho kule slot ikakhulukazi uma ufika nesithukuthezi evamile imishini nezithelo ukucinga okuthile okusha. Nokho, ungase ube nomuzwa yokuntuleka ibhonasi izici kule mobile Slots ekhasino, kodwa abanendlela etholakalayo izokukhokhela esanele ukwenza usuku lwakho.
Yazi kabanzi mayelana Lucky Links Slots umdlalo
Lucky Links Slots udlalwa nge 5 esondweni futhi 25 paylines okuyinto ikuvumela ukuba bawine zombili izinkomba okungukuthi kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla kanye kusuka kwesokudla kuya kwesokunxele kanye. It ikuvumela ukuba spin ngoba 10p ukuba £ 250 spin ngayinye. Uma kuziwa Okubonwayo, umdlalo majorly onsomi kanye elikhazimulayo ukukhanya show kubonakala baphefumulelwa amakhasino we Fremont Street.
Amatshwayo okuyinto uzophawula phezu itolitji zenzelwe njengoba ehlukene namagugu ikhadi wezinhliziyo, amakilabhu, abakuthola namadayimane. Ngaphandle kwalezi, ezinye zazo othathwe indaba ephathwayo zenzelwe njengoba 4-leaf Clovers, 7s kathathu obomvu, Horseshoes kanye acorns. Uphawu ilogo Lucky Links uzokunika 7.5 izikhathi esigxotsheni yakho ingqikithi kokufika kwabo 5 ngesibalo yonkana iyiphi payline.
Njengoba kushiwo ngaphambili Acorn Pixies Slots Ibhonasi kungenziwa senziwa kokufika eyanele ibhonasi izimpawu phezu itolitji. Lo mklomelo intando nawe osebenzisa eziyisikhombisa khulula okuza up inguqulo enwetshiwe we itolitji. Njalo esondweni manje ibe kabili kunobukhulu balo basekuqaleni yingakho ukunikeza nawe 50 paylines ukudlala nge. Futhi, the wilds ingase ivele kwi itolitji kanye. Letimphawu ngeke ke uhlale esikrinini lonke sici okuzokwenza kube lula nakakhulu ngawe ukuwina. Ukuthola lucky nalesi sici kungase kukunike ukukhokhelwa okusezingeni eliphezulu kule slot.
Ungase uthole ukuthi isihloko hhayi ukuzitika kakhulu kodwa jikelele, Acorn Pixies Slots umdlalo enhle ukuba izitike. Ungahlala ungene kule Ucingo Slots ekhasino noma kunini uma uthanda ukudlala ukuhluka kancane kule Gameplay kanye slot ehloniphekile ukukhokha.